"Aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin’ny fahalotoana rehetra, na amin’ny nofo na amin’ny fanahy, ka hahatanteraka ny fahamasinana amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra."2 Korintiana 7:1
Matetika ny tsy fisian’ny fahadiovana dia mampihanaka ny aretina. Toy izany koa, ny fahasalamana ara-panahy dia mitaky «fahadiovana» tsy tapaka. Rehefa hanasa ny tongotr’i Petera ny Tompo Jesosy, dia nanazava taminy hoe: “Raha tsy hosasako ianao, dia tsy manana anjara amiko” (Jaona 13:8). Ny tongotra madio dia maneho fahadiovana ara-pitondrantena, na aiza na aiza aleha. Ny «fahalotoana» dia manimba ny fiombonantsika amin’ny Tompo ary manakana antsika tsy hanompo Azy tsara.
Terentsika ny ankizy hanasa tanana, alohan’ny hisakafoana. Aoka àry ny fo na fieritreretana maloto tsy holeferina ihany koa, mba hitandrovana fifandraisana feno fifaliana amin’ny Tompo, indrindra rehefa mivory manodidina Azy miaraka amin’ireo rahalahy sy anabavy, mba hahatsiaro ny fahafatesany. Aleontsika ve handany fotoana bebe kokoa hanaovana izay maha metimety ny hita ivelany, toy izay hiomana ara-panahy? Ho an’iza no ahatongavantsika eo? “Ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo” (1 Samoela 16:7).
Arakaraka ny maha ela ny fijanonan’ny faharatsiana eo amintsika, no mahasarotra ny fanalana izany. Raha ara-batana, dia mampiasa rano isika mba hisasana. Raha ara-panahy, dia ny Tenin’Andriamanitra no manadio antsika. Jesosy Kristy, Izay tia ny Fiangonany, dia manadio azy “amin’ny rano fanasana amin’ny teny” (Efesiana 5:26). Ny famakiantsika Baiboly isanandro no hahatonga antsika hadio “ho afaka amin’ny fahalotoana rehetra, na amin’ny nofo na amin’ny fanahy”, na hita maso na tsia, na amin’ny fisainana na amin’ny asa.